Abaphathiswa ababalaseleyo boKhenketho baza kuthetha ngoSuku lwe-Afrika loKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Abaphathiswa ababalaseleyo boKhenketho baza kuthetha ngoSuku lwe-Afrika loKhenketho
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseNigeria zokuPhula • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
UMphathiswa wezoKhenketho eJamaica oHloniphekileyo u-Edmund Bartlett uza kuba phakathi kwabaphathiswa abahlanu bezokhenketho abaza kuthetha ngexesha lomsitho oye watsala abantu abaphambili ukuba babelane ngamava kunye nezimvo zabo ngokhenketho lwase-Afrika ngexesha nasemva kobhubhani we-COVID-19.
Abaphathiswa abahlanu abadumileyo bezokhenketho kulindeleke ukuba bathathe inxaxheba, bathethe emva koko bathethe ngohlelo lwesibini loSuku lwe-Afrika loKhenketho olucwangciselwe ukuba mva eLagos, ikomkhulu lezorhwebo laseNigeria ezinzulwini zobusuku balo Lwesihlanu.
UHlelo lwesiBini loSuku loKhenketho lwase-Afrika (i-ATD) luya kuqhutywa kwikomkhulu lezorhwebo laseNigeria ukusuka ngomhla wama-25 kuNovemba ukuya kowama-26 kuNovemba wama-2021.
eTurboNews izakusasaza ngqo uSuku lwezoKhenketho lwaseAfrika, kwaye abafundi banokuzimasa kwiZoom.
Lo msitho ubambisene ne IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika kwaye i Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica uGqirha Edmund Bartlett
Abanye abaphathiswa abaza kuthatha inxaxheba kulo msitho nguMoses Vilakati, uMphathiswa wezoKhenketho kunye neMicimbi yokusiNgqongileyo kuBukumkani base-Eswatini, oHloniphekileyo uPhildah Nani Kereng, umphathiswa weSebe lezeNdalo, iMithombo yeNdalo, uLondolozo noKhenketho eBotswana.
Abanye nguDkt. Memunatu Pratt, uMphathiswa waseSierra Leone wezoKhenketho kunye neMicimbi yeNkcubeko kunye noDkt. Damas Ndumbaro, uMphathiswa waseTanzania wezeNdalo kunye noKhenketho.
Owayesakuba nguMphathiswa wezoKhenketho neNkcubeko weRiphabhlikhi yaseSeychelles kunye noMongameli we IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB) INhlonipho. UAlain St. Ange ngomnye umntu obalaseleyo kushishino lwabakhenkethi e-Afrika ukuba athathe inxaxheba emva koko athethe kumsitho woSuku lwe-Afrika loKhenketho.
UMongameli weBhodi yezoKhenketho yase-Afrika (i-ATB) oHloniphekileyo. Alain St. Ange
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika USihlalo wesiGqeba uMnu. Cuthbert Ncube imiselwe ukuxoxa emva koko yabelane ngemiba ebalulekileyo malunga nokhenketho olutyebileyo lwase-Afrika kunye nelifa lemveli ngexesha lomsitho we-ATD.
USihlalo wesiGqeba seBhodi yezoKhenketho yase-Afrika uMnu. Cuthbert Ncube
Umsitho we-ATD utsale umdla omkhulu kwezokhenketho kulo lonke ilizwekazi lase-Afrika, i-United States of America, i-Europe kunye namanye amazwe ehlabathi ukuba baxoxe, babelane ngezimvo ezakhayo baze batshintshiselane ngamava abo atyebileyo ngezona ndlela zingcono eziya kunceda ukuphuhlisa ngoko ke urhwebo lokhenketho lwase-Afrika. kunye neAfrika iyonke kwiimarike zabakhenkethi behlabathi.
Iphethe uMxholo “wokudityaniswa koKhenketho, uRhwebo kunye noZinzo, iiMfuno zeAfrika, ngexesha kunye nasemva kwe-COVID-19 Era”, umsitho woSuku lwesiBini loKhenketho lwase-Afrika uza kuqaqambisa ubutyebi belifa lemveli neenkonzo ezibonelelwa kwicandelo lokhenketho lwase-Afrika.
I-International Organisation Committee (IOC) ibhengeze ukusingatha uhlelo lwesibini loSuku lwe-Afrika loKhenketho, ekucingelwa ukuba luza kubanjwa.
USuku lwe-Afrika loKhenketho lunikezelwe ekugxininiseni kwilizwekazi lase-Afrika njengomsitho welizwekazi, odibanisa oorhulumente, imibutho emanyeneyo, abachaphazelekayo kunye nabanye abakwikhonkco lexabiso lezokhenketho ukujongana nemiba echaphazela eli candelo.
I-ATD iyilwe ngoko yanikezelwa ukuzisa abantu abaphambili kwezokhenketho kuquka abaqulunqi bemigaqo-nkqubo yesizwe, abachaphazelekayo kushishino, iindwendwe kunye nabanye abadlali bokhenketho babhiyozela ubutyebi be-Afrika, utshilo uNksz Abigail Adesina Olagbaye weDesigo Tourism Development and Facility Management Company.
Iinjongo ze-ATD, phakathi kwezinye, kukubhiyozela nokubonisa i-Afrika kwiqonga lehlabathi, amandla eenkcubeko ezahlukeneyo kunye nee-asethi zokhenketho, ilifa lemveli kunye nezinto ezinokubakho kuyo yonke intsingiselo yayo, ubuhle nobunjani, utshilo uNksz Abigail.
Lo msitho uza kuhlanganisa ama-Afrika angaphandle kwamanye amazwe kunye namanye amazwe ase-Afrika, abahlobo be-Afrika ukuze baxabise ixabiso leshishini elinegalelo elikhulu kuphuhliso loqoqosho nelidala imisebenzi, lingenise ingeniso kunye nokuphucula iindlela zokuphila noluntu kwilizwekazi liphela.
I-ATD nayo iza kwandisa kwaye igxile kwicandelo lokhenketho lwase-Afrika ize iveze imingeni nemiba ethintela ukukhula nophuhliso lokhenketho.
Izakwenza imephu yezisombululo zohlumo, impumelelo kunye nenkqubela phambili yekamva yecandelo lezokhenketho, ngakumbi ukukhuthaza uzinzo nokugcinwa kwalo.
Olu suku luza kuvuselela isizukulwana esilandelayo kulwazi nokuxabisa ilifa lenkcubeko nendalo yase-Afrika, kananjalo kudalwe kwaye kuququzelelwe unxibelelwano “kwi-Afrika yama-Afrika” kunye ne-Friends of Africa enokuthi ibenakho ukuguqula amathemba okhenketho elizwekazi libe ngamathuba oshishino notyalo-mali.
Abathathi-nxaxheba kuSuku lwe-Afrika loKhenketho baya kuba yinxalenye yembali baze babonelele olunye uhlelo oluchulumancisayo lomsitho wotyikityo lweAfrika olubekela bucala usuku lwelizwekazi lokukhumbula ukhenketho minyaka le kunye negalelo lalo kuqoqosho lwase-Afrika.
Olu suku luza kwenza imephu yeendlela zokukhula kokhenketho kunye nophuhliso lwelizwekazi lase-Afrika, emva koko kudityaniswe amashishini, utyalo-mali, amathuba othungelwano nabachaphazelekayo ngaphakathi nangaphandle koshishino.
Abathabathi-nxaxheba kulo msitho nabo, baya kufumana ulwazi kunye namanyathelo afunekayo ukuze bawathathe njengoko kusebenza kukhenketho, urhwebo, uzinzo kunye nokutshintsha kwemozulu.
Imisebenzi emininzi iza kube iphawula uSuku lwe-Afrika loKhenketho ekulindeleke ukuba lugqubathele kumazwe ahlukeneyo ase-Afrika ngosasazo olubonakalayo.
USuku lwe-Afrika loKhenketho lwasungulwa ngo-2020 (kunyaka ophelileyo) ngenxaxheba evela kumazwe angama-79 kunye nezithethi ezingama-21 ezivela kumazwe ali-11.
Cofa apha ukujoyina inkomfa yeZoom